Fanaraha-maso ekolojika | Fiaretana haran-dranomasina
Ny drafitra fanaraha-maso dia afaka manampy ny mpitantana ihany koa hamaritra izay karazana programa fanaraha-maso tokony hapetraka. Ireto ambany ireto misy karazana programa fandaharana telo samihafa:
Ny fanaraha-maso mahazatra dia matetika ampiasain'ny mpitantana ny haran-dranomasina mba hanaraha-maso ny fanjakan'ny haran-dranomasina mandritra ny fotoana maharitra, ahafahan'izy ireo mametraka sisin-tany sy mamantatra ny fiovana. Ny ohatra amin'ny programa fanaraha-maso mahazatra efa niasa dia misy ireo novolavolain'ny Global Coral Reef Monitoring Network ( misokatra amin'ny varavarankely vaovaoGCRMN) ary ny tomban-kase ny Atlantika sy ny Hoodin'i Rapid Reef ( misokatra amin'ny varavarankely vaovaoAGRRA).
Misitrika mametaka kasety fandikana. Sary © Tim Calver
Ny fanaraha-maso mavitrika dia ampiasain'ny mpitantana mba hamenoana ny programa fanaraha-maso mahazatra rehefa misy ny haran-dranomasina vokatry ny korontana mahery vaika toy ny fanalefahana, fahasimban'ny tafio-drivotra, ny fidinan'ny sambo ary ny fipoahan'ny aretina. Matetika ny mpitantana dia mila mahafantatra ny fatra sy ny hamafin'ireo fiantraikany mahery vaika ireo raha vantany vao miseho izy ireo. Ny fanaraha-maso feno valiny dia manampy amin'ny fiantohana ny fifandraisana ara-potoana sy azo itokisana amin'ireo mpiray antoka ary manampy ny hetsika fitantanana lasibatra izay manohana ny fanarenana. Ny famolavolana programa fanaraha-maso mamaly dia manaraka ireo dingana naseho tao amin'ny fizarana Planing a Monitoring Plan, na izany aza, ny fanapahan-kevitra isaky ny dingana dia tokony hotarihin'ny karazana sy ny hamafin'ny fiantraikany.
Fanaraha-maso ireo sombiny naverina tamin'ny laoniny Acropora cervicornis ao amin'ny Florida Keys. Sary © Margaux Hein
Ny programa fanaraha-maso an-tsehatra dia misy mpandinika tsy manam-pahaizana - antsoina hoe mpahay siansa olom-pirenena indraindray amin'ny hetsika fanaraha-maso. Ireo hetsika fanaraha-maso ireo dia mety tarihin'ny mpahay siansa na mpitantana na manana mpanara-maso ny haran-dranomasina tsy miankina. Matetika ny mpitantana ny haran-dranomasina dia mampiasa programa fanaraha-maso fandraisana anjara hanombanana ny toetran'ny haran-dranomasina, ny fahitana ny fikorontanana, ny fanombanana ny fiantraikany aorian'ny fikorontanana, ary ny fanombanana ny fahombiazan'ny hetsika fitantanana. Ohatra amin'ny fanaraha-maso ny fandraisana anjara dia misy ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaoGreat Barrier Reef Marine Park Authority maso amin'ny programa Reef ary ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaoMaso an'ny programa Reef Hawaii.
Mpahay siansa olom-pirenena miasa ao anaty rano ao anatin'ny Programme on the Reef on the Great Barrier Reef. Sary © Fahefana manam-pahefana an-dranomasina Great Barrier Reef
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFomba fanaraha-maso ny tontolo iainana voajanaharymanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoCoral Bleaching Risk sy ny drafitrasa fanombanana ny vokatramanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFamonoana aretina miteraka aretina sy valin-kafatra mahazatramanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFanaraha-maso ny fanaraha-maso ny alàlan'ny fanjonoana an-dranomasina trondro avy amin'ny Artisanal Fishers ao Diani, Kenyamanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoSCUBA Divers ambonin'ilay riandrano: mampiasa sarintany an-tsehatra amin'ny fepetra haran-dranomasina mba hampahafantarana ny fitantanana haran-dranomasina